Travel | Great Arakan
ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 13, 2018
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 1, 2018 0
အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ဝင်ဖို့၊ ချီတက်လာကတ်တေ လူတန်းကို တားဆီးဖို့အတွက်၊ မက္ကဆီကို နယ်စပ်မှာ စစ်တပ်အင်အား ၁၅,၀၀၀ ထိ ချထားဖို့လို့၊ သမ္မတ ဒေါ်နဲလ် ထရုန့်ပ် က ပြောလိုက်ပါရေ။ အယင် ပန်တဂွင်(Pentagon) စစ်ဌာနချုပ်က ပြောရေ အရေအတွက်ထက်၊ ၂ ဆ ဖြစ်နိန်ပါရေ။ လက်ရှိ...
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - October 28, 2018 0
တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးက အများပြည်သူ သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်ရေဖက်ကို ဉီးတည်လာဗျာလ်ဖြစ်လို့၊ ရေရှည်မှာ လေယာဉ်ပျံ စီးရေ လူဉီးရေ များလာဖို့ဗျာလ်လို့၊ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့(International Air Transport Association (IATA))က ဖော်ပြထားပါရေ။ လာဖို့ နှစ် ၂၀ အတွက်၊ လေယာဉ်ပျံ စီးဖို့ ခရီးသယ်...
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - October 1, 2018 0
ကဗာမှာ နိုင်ငံခြားသားတိ ညအိပ် အလည်လာဆုံး မြို့က၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကော့ခ်မြို့ ဖြစ်ပါရေ။ ပျမ်းမျှ ၁ နှစ်ကို နိုင်ငံခြားသား သန်း ၂၀ လောက် အလည် ရောက်ပနာ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာလည်း ၉.၆ ရာခိုင်နှုန်း ပိုပနာ အလည်ရောက်တေအတွက်၊ ဘန်ကော့ခ်မြို့ကို...
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - June 14, 2018 0
ကဗာက လေးစားရရေ၊ ရူပဗေဒပညာရှင်နန့် အများအကျိုးကို သယ်ပိုးတတ်တေ နိုဗယ်ဆုရှင်၊ အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင် (Albert Einstein) စွာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတတ်မှန်း အဂု ပုံနှိပ်ထုတ်ဝယ်ရေ သူ့ခရီးလား ဒိုင်ယာရီစာအုပ်မှတ်တမ်းမှာ တွိရပါရေ။ အထူးသဖြင့် သူ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားစိတ်က တရုတ်လူမျိုးတိကို ဖြစ်ပါရေ။ ပရိန့်တင် တက္ကသိုလ်...
ငါ့ကိုယ်ငါ ရခိုင်လူမျိုး၊ ရခိုင်ပြည်ကို ချစ်တေလို့ ထင်နိန်မိစွာလား ….
Travel စံဂိုး အောင် - June 7, 2018 0
ငါ မျိုးချစ်တေလို့ ကိုယ့်စွာကို ထင်ပနာ၊ ကိုယ့်လူမျိုးတိ အေလောက်ထိ ဒုက္ခရောက် နိမ့်ကျနိန်စွာကို တခုပိုင်လည်း ဖေးမဖို့ မလုပ်ဘဲ၊ မမြင်ဟန်ဆောင်၊ မျက်နှာလွှဲနိန်ရေ၊ ကိုယ့်မှာ မရှိရေ အရည်အချင်းတိကို အရှိ လုပ်ပနာ ဟန်ဆောင်နိန်ရေ hypocrite များလား? hypocrite (ဟိုင်ပိုခြိုက်တ်) 1:aperson...
ဆော်ဒီသူတိ ကားမောင်းလို့တော့ ရဗျာလ်၊ ယကေလည်း အေ ၈ ခုကို လုပ်လို့ မရသိမ့်
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - June 6, 2018 0
ဗြီးခရေ တနင်္လာနိန့်က ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံသူ ၁၀ ယောက်၊ ပထမဆုံးအကြိမ် ကားမောင်း လိုင်စင် ရကတ်ပါရေ။ မမက်တိ ကားမောင်းခွင့် ပိတ်ပင်ထားစွာကို ပယ်ဖျက်တေနိ ဂျုန်လ ၂၄ ရက် မရောက်ခင်ထိ၊ နောက်ထပ် ဆော်ဒီသူ ၂ ထောင်လောက် ဆက်ပနာ ကားမောင်းလိုင်စင် ရကတ်ပါဖို့သိမ့်။ အယင်က...
အာကာသစခန်းမှာ ဂျပန် အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ပတ်အတွင်း ၉ စန်တီမီတာ အရပ် ပိုရှည်လာ
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - January 9, 2018 0
နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းထဲမှာ လွန်ခရေ ၃ ပတ်ထဲကပင် ရောက်နိန်ရေ ဂျပန် အာကာသယာဉ်မှူး နိုရီရှီဂီ ကာနာအိ(Norishige Kanai)စွာ အရပ် ၉ စန်တီမီတာထိ ပိုပနာ ရှည်လာရေလို့ ဆိုပါရေ။ အာသယာဉ်ထဲကိုတောင် ပြန်ဝင်လို့ ရဖို့သိမ့်လားဆိုပနာ စိုးရိမ်နိန်ရေလို့လည်း သူ့ တွယ်တာ(Twitter) အကောင့်မှာ...
တရုတ်က ပထမဦးဆုံး နီစွမ်းအင်သုံး အဝီးဗြီးလမ်းမ လျှပ်စစ်ကားတိကို အားသွင်းပီးဖို့
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - January 3, 2018 0
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး စမ်းသပ်တေ နီစွမ်းအင်သုံး ၁ ကီလိုမီတာ အရှည် အဝီးဗြီးလမ်းမက ယင်းလမ်းထက်မှာ ဖြတ်လားရေ လျှပ်စစ်ကားတိကို ဝါယာကြိုးမဲ့စနစ်နန့် အားသွင်းပီးလားဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ယင်းအဝီးဗြီးလမ်းမကို တရုတ်နိုင်ငံ ရှမ်ဒေါင်ဒေသ ဂျီနန်မြို့မှာ ကွီလူး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်စု(Qilu Transportation Development Group)က တနှစ်ကြာ...
လူ ၁၀၀ မှာ ၃၅ ယောက်က သန်းကြွယ်သဌေး ဖြစ်နိန်ရေ မိုနာကိုနိုင်ငံ
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 26, 2017 0
ကဗာ့သန်းကြွယ်သဌေးတိ အလုအယက်နိန်လာကတ်တေအတွက် နိန်စရာ မြေမရှိ ဖြစ်လာရေခါ မြေထဲပင်လယ်ထဲမှာ လူနိန်အိမ်ယာစီမံကိန်းတခုကို ထပ်တိုးချဲ့ပီးဖို့ မိုနာကို မင်းသား အောလ်ဘာ့တ် ၂ (Prince Albert II)က မီးစိမ်းပြလိုက်ပါရေ။ ယင်းအိမ်ယာစီမံကိန်းမှာ နောက်ထပ် သန်းကြွယ်သဌေး ၂၇၀၀ ဦး နောက် ၁၀ နှစ်အတွင်း နိန်နိုင်အောင်အတွက်ဆိုပနာ...
ခရီးလားခါနီး အင်္ကျီကို ဇာပိုင် ခေါက်ထည့်ဖို့လဲ?
Travel ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 19, 2017 0